गफ ! .....: दुई गफहरु
Posted by दीपक जडित at 5:39 AM
तपाईको गितहरु ब्लगमा अपलोड गर्नु भएकोमा खुशि लागेको छ , तर २,४ दिन एता मेरो ब्रोडब्याण्डले काम नगरेकोले सुन्न पाएको छैन । यो ठीक हुने बित्तिकै सुन्ने छु ।
दोस्रो कुरा ईन्टरनेट र ब्लग लेखन पक्कै पनि अभिव्यक्तिको यौटा सशक्त माध्यमको रुपमा बिकसित हुदैछ।
बास्तबमा सोच र अभिव्यक्ति केहि फरक भएपनि जसले पनि लेख्छन, ति सबैजना आफ्नो बिचार सकेसम्म धेरैको पहुँचसम्म पुगोस भन्ने चाहन्छन । त्यसैले पारिश्रमिक नलिई लेख छपाउने सन्दर्भमा म पनि सोच्छु की कुनै एक ठाँउमा प्रकाशित भएपछि सोहि लेखलाई आर्को ठाँउमा छाप्न पाईन्न भनेर बिचारको बिस्तारलाई अंकुश लगाउनु ठीक कुरा भने होईन ।
नारायण गोपालको गितहरु भलै सबै रेडियो नेपालकै स्टुडियोमा रेकर्ड भए होलान तर के अरु कुनै पनि रेडियो स्टेशन वा एफ एम मा त्यो गित नबजाउने त?।
लेख्‍ने मान्छेले पारिश्रमिक नलिदांको समयमा उसले आफ्नो रचना सबैतिर छाप्न र आफ्नो बिचार बढि भन्दा बढि माध्यमद्वारा बाँडन पाउनु पर्छ ।
नेपाली गितसंगित मा यस्ता धेरै विकृतिहरु छन् जस्तो लाग्छ । जस्तो कि मैले ती गितहरु बराल सरको बाट ल्याउनेक्रम मा केही गफगाफ भएको थियो । बराल सर ले भन्नुभाथ्यो, मेरो नाम "रचनाकार" का रुप मा हरेक एवार्ड फंङ्सनमा हुन्छ तर म विरलै पाउने गर्छु, कसलाई एवार्ड दिने भनेर पहिले नै निर्णय गर्दार'छन् अनि आफूले के पाउनु । सन्दर्भ फरक छ, तर पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने, सबैतिर बाट कलाकर्मीहरु धैरै चेपिएका छन् । अझ तपाइजस्ता नयाँ अनुहारहरु धेरै पेलिएको अनुभव मैले गरेको छु ।
साथै, यो पनि जानकारी गराइहालौँ कि, अब बराल सरका गितहरु मेरो ब्लगमा रहेनन् । पहिले बरालसरले मौखिक अनुमति दिनुभएको भएपनि, १ महिना पछि उहाँले कपिराइटको कुरा उठाउँदै, ब्लग बाट ती गितहरु हटाउन भनेपछि, मैले गितहरु निकालिदिँए । मलाई पनि एउटा कुरा के अनुभव भयो भने, जुनसुकै फिल्डमा पनि नयाँलाई समस्या छ । कति साइटहरुमा बरालसरका गितहरु विनाअनुमति निर्वाद बजिरहेकाछन् र डाउनलोड भैरहेकाछन् तर मलाई पहिले अनुमति दिएर पनि पछि कपिराइटको भुत ले तर्साएर ब्लग तथा अर्काइब डट ओआरजी बाट गितहरु निकाल्न लगाइयो । ----------- यस्तै छ यहाँ को चलन !
प्रथम त दिलीपजी र आकारजीलाई प्रतिक्रियाको लागी धन्यवाद !
दिलीपजी , आशा गर्छु गीतहरु सुनेर उता गिती संग्रह बनाएको ब्लगमा प्रतिक्रिया लेखिदिनुहुनेछ ।
हुनत नेपाली भाषाका धेरैजसो ईन्टरनेट पत्रिकाहरुले आफुकहाँ आएका रचनाहरु अन्यत्र प्रकाशित गराउन हुन्न भनेर बन्देज लगाएका छैनन र सबै लेखक रचनाकारहरुलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने खालका पनि छैनन । मैले जम्मा एकपल्ट मात्र अनुरोध स्वरुप नै सुनेको हुँ त्यस्तो कुरा र पनि मलाई कुरीकुरी महसुस भएर ब्लगमा पोखेको हुँ । मेरो पनि तपाईंको जस्तै नै धारणा छ रचनाहरु प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा ।
आकारजी , तपाईंले ठिक भन्नुभयो , यद्यपि समस्या स्थापित भएकाहरुमा नहुने हैन तर नयाँलाई हरेक ठाउँमा समस्या हुनेगर्छ । बराल सरले वहाँका गीतहरु मार्फत कतैबाट फाईदा पाईरहनुभएको हुनसक्छ र तपाईंलाई रोक्नुभएको हुनसक्छ । पहिले मौखिक रुपमा अनुमति दिनुभएर पछि कपिराईटको कुराले हटाउन लगाउनु भएको चैं डाउनलोड गरेर अनधिकृत उपयोग हुन्छ भनेर हुनसक्छ तर जहाँसम्म निर्वाध रुपमा जताततै डाउनलोड गरिने कुरा छ त्यो चाहीँ वहाँले रोक्न सक्नुहुन्न निश्चय नै ।